Autism (အော်တစ်ဇင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Autism (အော်တစ်ဇင်)
Autism (အော်တစ်ဇင်) ကဘာလဲ။
အော်တစ်ဇင် ဆိုတာက ကလေးဘဝထဲကစပြီး တစ်ဘဝလုံးကြန့်ကြာနေနိုင်တဲ့ ဦးနောက်အာရုံကြောနှင့် ဖွံဖြိုးမှုဆိုင်ရာ စိတ္တဇအထီးကျန်ဝေဒနာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အော်တစ်ဇင် က လူတွေနှင့် ဆက်ဆံတာတွေ၊ ပြောဆိုတာတွေနှင့် သင်ကြားမှုပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ လူမှုဆက်ဆံရေး၊ အရိပ်ပြ အကောင်မမြင်၊ စကားနားမလည်ခြင်း နှင့် အမြင်ကျဉ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ အစွဲအလမ်းကြီးခြင်း စတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမူတွေက အနည်းအကျဉ်းမှ ဒုက္ခိတဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အော်တစ်ဇင် က ရောဂါနှင့် ရောဂါလက္ခဏာအနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ရောဂါအခြေအနေ မပြင်းထန်တဲ့ ကလေးတွေ သို့မဟုတ် ပိုဆိုးတဲ့ရောဂါတွေက ဖုံးကွယ်ထားခံရလျှင် မသိသာနိုင်ပါဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ အော်တစ်ဇင် ကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာကို သေချာမသိကြသော်လည်း မျိုးရိုးဗီဇနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် နှစ်မျိုးစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
Autism (အော်တစ်ဇင်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အော်တစ်ဇင် ဟာ ကလေးတွေတော်တော်များများမှ တွေ့လာရတာနှင့်အမျှ ပိုပြီးအဖြစ်များလာပါတယ်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဌာန(CDC) အရ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ အော်တစ်ဇင် တွေ့ရှိမှုူဟာ တစ်ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ကလေးအယောက် ၁၀၀ မှာ ၁ ယောက်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အော်တစ်ဇင် က မိန်းကလေးတွေမှာထက် ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ၅ ဆ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Autism (အော်တစ်ဇင်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တချို့သော အော်တစ်ဇင် ရဲ့ လက္ခဏာတွေက အနည်းငယ်မှ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေက အလွန်ငယ်သေးတဲ့ အခြေအနေ ၁ နှစ် ကနေ ၂ နှစ်ကလေးငယ်တွေမှာတောင် စပြနိုင်ပါတယ်။ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
• မတုန်မလှုပ် ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း
• ကိုင်တာ မကြိုက် သို့ ချီတာမကြိုက် သို့မဟုတ် သူတို့လိုအပ်မှသာချီခိုင်းစေတတ်ခြင်း
• တခြားသူက ညွှန်ပြတဲ့အရာကို တည့်တည့်မကြည့်နိုင်ခြင်း
• ပုခက်ထဲ သို့ အိပ်ရာထဲမှာသာ တစ်ယောက်တည်းနေလိုခြင်း တစ်ခါတစ်ရံ နာရီပေါင်းများစွာ ကြာတတ်သည်။
• လူတွေ စကားလာပြောလျှင် သတိမပြုသယောင်ပြတတ်သော်လည်း တခြားသော အသံများကိုတော့ တုံ့ပြန်မှုရှိခြင်း
• အပြုအမူတစ်ခု သို့ ကိစ္စတစ်ခုကို ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်နေတတ်ခြင်း ဥပမာ လက်ချောင်းတွေ လှုပ်နေတတ်ခြင်း၊ ပစ္စည်းတွေ စီနေတတ်ခြင်း
• ပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခု ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ ကျင့်သားရနိုင်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း
• သူတို့လိုအပ်တဲ့အရာကို ပြောပြဖို့ရာ သို့မဟုတ် ပြဖို့ရာ အခက်တွေ့နေတတ်ခြင်း
• ပိုကြီးတဲ့ကလေးတွေမှာ အသံ၊အနံ့၊ထိတွေ့မှု သို့ အရသာတို့ကို တုံ့ပြန်မှုလွန်ကဲခြင်း
• စိတ်ကူးယဉ်နိုင်စွမ်း မရှိခြင်း
• စကားပြော နောက်ကျခြင်း
Autism (အော်တစ်ဇင်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုတော့ အဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါ။ အော်တစ်ဇင် ဟာ မိဘတွေရဲ့ လေ့ကျင့်ပေးမှုနဲ့လည်း ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ သီအိုရီကိုလည်း လက်ခံခြင်းမရှိတော့တာ ကြာပါပြီ။ ကလေးတွေကို ကူးစက်ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြောင့်လည်း အော်တစ်ဇင် ဖြစ်နိုင်ချေ မမြင့်မားစေနိုင်ကြောင်းကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များစွာအရ သိရှပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Autism (အော်တစ်ဇင်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အော်တစ်ဇင် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
• လိင်။ ။ အော်တစ်ဇင် က မိန်းကလေးတွေမှာ ထက် ယောင်္ကျားလေးတွေမှာ ၅ ဆ ပိုအဖြစ်များနိုင်ပါတယ်။
• မိသားစုကျန်းမာရေးရာဇဝင်။ ။ အော်တစ်ဇင် ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရှိနေတဲ့ မိသားစုမှာ နောက်ထပ် အော်တစ်ဇင် ကလေးတစ်ယောက်ရနိုင်ဖို့ များပါတယ်။
• တခြားရောဂါများ။ ။ အော်တစ်ဇင် ဟာ တစ်ချို့သော မျိုးရိုးဗီဇရောဂါတွေ ဥပမာ fragile X syndrome သို့ tuberous sclerosis ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
• လမစေ့ ကလေးငယ်များ။ ။ နေ့မစေ့ လမစေ့ပဲ မွေးတဲ့ ကလေးတွေမှာ အော်တစ်ဇင် ဖြစ်တာများတာလဲ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၆ ပတ်မတိုင်ခင် မွေးတဲ့ကလေးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေများတတ်ပါတယ်။
• မိဘတွေရဲ့ အသက်အရွယ်။ ။ အသက်ကြီးမှ ကလေးယူတဲ့ မိဘတွေနှင့် အော်တစ်ဇင် ဆက်စပ်မှု ရှိကြောင်းကိုလည်း သုတေသီတွေက တွေ့ရှိထားပါတယ်။
Autism (အော်တစ်ဇင်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အော်တစ်ဇင် ရောဂါအဖြေရှာခြင်းမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အဆင့်နှစ်ဆင့် ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ဆင့်ကတော့ ကလေးအထူးကု သို့ အစောပိုင်းကလေးကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူတို့နှင့် ပုံမှန်ရက်ချိန်းပြခြင်းဖြင့် ယေဘုယျ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြသနာတွေရှိနေတဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ နောက်ထပ် စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လွှဲပြောင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ဆရာဝန်တွေ နဲ့ တခြားအထူးပြုနယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေ အမြောက်အမြားပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အလုံးစုံစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာတော့ ကလေးမှာ အော်တစ်ဇင် သို့ တခြားသော ဖွံဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ရောဂါရှိမရှိ အတည်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Autism (အော်တစ်ဇင်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လောလောဆယ်မှာတော့ အော်တစ်ဇင် အတွက် ကုသရန်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ သို့သော်လည်း သုတေသနပြုမှုအရ အစောပိုင်းကြားဝင်စွက်ဖက်ကုသမှုတွေနဲ့ ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ တိုးတက်လာနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကုသမှုတွေကတော့
• စကားပြောခြင်းနှင့် ဘာသာစကားကုထုံး။ ။ အော်တစ်ဇင် ကလေးတွေမှာ စကားပြောလေ့ကျင့်ခန်းတွေနှင့် အပြန်အလှန် ရုပ်သံပြ အထောက်အကူတွေနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင် ကျင့်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
• အလုပ်အကိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံး။ ။ အော်တစ်ဇင် ကလေးတွေကို နေ့စဉ် ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် နှင့် နေထိုင်နိုင်ရန် ကျင့်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
• ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံး။ ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုရှိစေရန် နှိပ်နယ်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း အစရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေနှင့် ကုသခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အော်တစ်ဇင် ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် အော်တစ်ဇင် ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• ကုသမှုပြီးတိုင်း ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားမှုကို လိုက်နာပါ။
• ထပ်ခါတစ်လဲလဲလုပ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့် ပျောက်စေရန် အိမ်မှာ ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု သတ်မှတ်ထားပါ။
• ဆရာဝန်တွေနှင့် ဆွေးနွေးအတိုင်ပင်ခံတွေ ဦးဆောင်တဲ့ ကုသရေးအစီအစဉ်မှာ သင့်ကလေးကို စာရင်းသွင်းထားပါ။
• မိဘတွေ သို့ အော်တစ်ဇင် ကလေးတွေအတွက် လုပ်ပေးတဲ့ ဒေသခံ အထောက်အပံ အသင်းတွေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာ ပါဝင်ကြည့်ပါ။
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 639.
Porter, Robert. Kaplan Justin. Homeier Barbara.The Merck manual home health handbook. New Jersey: John Wiley &
Sons, Inc, 2009. Print edition. Page 1851.
"Autism." Centers for Disease Control and Prevention.http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/. Page 1851. Assessed Jul13 2016.
Autism Fact Sheet.http://www.ninds.nih.gov/disorders/autism/detail_autism.htm. Assessed Jul 13 2016.Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 639.